Chii chinonzi aluminium bhodhi Aluminium bhodhi mhando yesimbi yakavakirwa mhangura yakapfeka bhodhi ine yakanaka kupisa kupisa basa. Kazhinji, imwe chete pani inoumbwa nematanda matatu, ayo ari wedunhu rukoko (mhangura foil), kuputira rukoko uye yesimbi base rukoko. Izvo zvakajairika mune zvigadzirwa zvemwenje zveLED. Th ...
IPC yakazivisa zvakawanikwa munaNovember 2020 kubva kuNorth American Printed Circuit Board (PCB) Statistical Chirongwa. Iyo bhuku-kune-bhiri reshiyo inomira pa1. Yese yekuNorth America PCB inotumirwa munaNovember 2020 yakakwira 1.0 muzana ichienzaniswa nemwedzi mumwecheteyo gore rapfuura. Kuenzaniswa nemwedzi wapfuura, N ...
Sezvo nyika inochinja kune zvinokonzeresa denda repasirese, pane zvimwe zvinhu zvingavimbike nazvo kuti zvirambe zviripo. Hupfumi hweChinese hwakatambura pakutanga kwenjodzi iyi, hwasimudzwa zvakanyanya, neChinese yekugadzira zviitiko zvawedzera kune 9th yakatwasuka ...
Iine ruzivo rwakakura muPBB indasitiri, Bill van de G Friendt PCB Kubatanidza BV seMakiyi Akakosha Maki kumusika weDutch. Nesimba rakasimba uye neruzivo rwakawanda, ruzivo rwake rwakafara rwemakore gumi muPCB indasitiri uye makumi maviri neshanu mune zvemagetsi, kambani inoti Bill ichasimbisa ...